Nagu saabsan – Manilla Klinik
Translation to the Somali language is not finished yet and will be updated
Kilinikada Manilla waxaa bilaabay Örebro Dr Mustafa Raoof sanadkii 2010. Kiliinikada Manilla waxaa gabi ahaanba si gaar ah u maamula Dr Mustafa Raoof oo ah takhtar shati leh, takhasus ku leh qalliinka iyo Dr Dheaa Al-Rammahi oo ah dhakhtar shati leh oo leh waxqabadka Urology. Hadafkayagu waa inaanu siinno adeeg caafimaad oo tayo leh bukaannadeenna.
Rugta caafimaadka ee Manila waa rugo caafimaad oo gaar loo leeyahay, taas oo ah, codsadayaashu waxay iska bixiyaan qarashkooda. Waxaan ku deeqnaa gudniinka wiilasha iyo ragga. Waalidku waxay helaan macluumaad ku saabsan gudniinka qalliinka ka hor.
Na soo hel!
Xiriirimaha muhiimka ah
Fadlan soo wac ama emayl si aad ballan u sameysato